UNAIDS Inoti Zimbabwe Haipo paNyika Nomwe Dzaderedza Kutapurirwa kweVana HIV
Chikunguru 15, 2013
HARARE — Masangano anorwira kodzero dzevanorarama neHIV/AIDS anoti panofanirwa kuva nemushandira pamwe wakasimba pakati pehurumende nemasangano akazvimirira mukugadzirisa zvimhingamipini zviri kuita kuti vana vanoberekwa vange vaine hutachiona.
Kurudziro iyi inoitika mushure meongororo yakaitwa ne United Nations inoratidza kuti Zimbabwe haisi panyika nomwe dzemuAfrica dzine zvirongwa zvakakwanisa kudzikisa kutapurirwa kwevana hutachiona kubva kunana amai vavo.
Mukuru wesangano reWomen and Aids Support Network, Amai Mary Sandasi, vanoti pane zvinhu zvakawanda zvinogona kunge zvakatadzisa Zimbabwe kubudirira pachirongwa chePrevention of Mother to Child Transmission, PMTCT.
Amai Sandasi vanoti chimwe chizvikonzero zvisiri kukosheswa zvakanyanya nevari kuita chirongwa ichi inyaya yekusabatana kwevarume nana amai mukupinda muchirongwa ichi.
Amai Sandasi vanoti kudzikiswa kwekutapurirwa kweHIV muvana kubva kunana amai vavo, zvakakosha zvikuru. Vanoti masangano ose pamwe chete nehurumende anofanirwa kukoshesa nyaya iyi.
Mashoko Amai Sandasi anotevera gwaro rakaburitswa mwedzi wapera ne Joint United Nations Program on HIV/AIDS, UNAIDS.
UNAIDS inoti nyika dzemu Africa dzakakwanisa kudzikisa huwandu hwevana vanobatwa neHIV vachiri mudumbu maamai vavo kubva muna 2009 kusvika 2012 dzinoti Botswana, Ethiopia, Ghana, Malawi, Namibia, South Africa ne Zambia.
Nyika idzi dzinonzi dzakakwanisa kuderedza kutapurirwa kweHIV muvana vasati vazvarwa nezvikamu makumi mashanu kubva muzana. Kunyange hazvo Zimbabwe isiri panyika nomwe idzi, Unaids inoti Zimbabwe neTanzania dziri kuratidzawo kubudirira kunoonekwa muchirongwa ichi.
Mutungamiri wechirongwa cheHIV/AIDS musangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights, VaTinashe Mundawara, vanotiwo varume vakawanda ndivo vanotonga misha yavo, nokudaro vakatora matanho ekupinda muchirongwa chePMTCT, madzimai avo anogona kutambirawo chirongwa ichi nyore nyore, izvo zvinozoita kuti kutapurirwa kwevana kudzikire.
VaMundawarara vanoti kutarisirwa pasi kwevanhu vanenge vaine HIV inyaya huru chaizvo inofanirwa kucherechedzwa nemasangano akazvimirira pamwe nehurumende kana vave kuronga zvirongwa zvavo zvekushambadza chirongwa chePMTCT.
Kunyange hazvo Zimbabwe isiri panyika nomwe dzakaita zvakakanaka mukudzikisa kutapurirwa kwevana hutachiona, UNAIDS inorumbidza zvirongwa zvemuZimbabwe, izvo zvaona huwandu hwevana vari kuwana mishonga yema ARVs huchipetwa kaviri kubva muna 2009.
Sangano re UNAIDS rinokurudzira zvikuru kuti patorwe matanho ekuvheneka ropa revana nekukurumidza kuitira kuti vaiswe pamishonga nekukurumidza kana vaine HIV.